Indawo yokujonga igadi enequla ekwabelwana ngalo (eNo 3)
Albion, Rivière Noire District, Mauritius
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJean Marc
Xa iyi-97 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Lush kwaye lunoxolo 3-igumbi lokulala kwindawo yokuhlala edibeneyo kunxweme olusentshona lweMauritius enokufikelela ngokuthe ngqo epakini. Umbono wolwandle ukusuka kwi-balcony, apho ukutshona kwelanga okumnandi kunokonwabela. Indawo yokuhlala yi-15 min ukuhamba ukuya eAlbion beach kunye ne-2 min ngemoto.
Indlu enefenitshala epheleleyo kunye nexhotyisiweyo, ibonelela ngegadi eqhelekileyo kunye nedama kunye nendawo yokupaka enye.
Le ndlu ikwiyunithi yokuhlala enezinye iindawo ezi-3. Indlu nganye izimele kwaye inegadi encinci ngaphambili kunye nepatio yabucala kunye nebalcony enegadi kunye nembono yolwandle.
Yintoni eyenza le ndawo yokuhlala igqame sisithunzi selanga esimangalisayo esibonelela ngenjikalanga nganye kunxweme olusentshona- isibane esihle esiorenji esigqume indlu kunye negadi, ixesha elifanelekileyo lokonwabela i-cocktail kwibalcony kwaye ubukele indawo.
I-wifi ekhawulezayo – i-97 Mbps
Ubumelwane buzolile njengeAlbion, indawo encinci yokuhlala elunxwemeni. Emva kwemini phakathi kwentsimbi yesi-5 ukuya kweyesi-7 ngokuhlwa kukho intshukumo ethe kratya njengoko abamelwane bebuyela ekhaya emva komsebenzi, abantwana bonwabele injikalanga yabo egadini, abanye bayabaleka okanye behamba nezinja. Emva kweli xesha kuthe cwaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Jean Marc
Ujoyine nge- 2021 Novemba
Hi, I am Jean Marc, a happy father of 4 young adults. I am freshly retired and a passionate of gardening.
Sifumaneka ukuba kukho nayiphi na imibuzo kwaye umninimzi uhamba nge-10 min kude.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 16:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Albion